State Counsellor receives Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs
State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received the delegation led by the Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs and Deputy Emergency Relief Coordinator of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) Ms. Ursula Mueller at 11:15 a.m. on 14 May 2019, at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they exchanged views on the matters relating to the Humanitarian Assistance programmes undertaken by the United Nations in Myanmar and provision of assistance by the United Nations in the implementation of the Government’s initiative National Strategic Plan for the closure of IDP camps, as well as peace and development in Myanmar.
Also present at the meeting were Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement Dr. Win Myat Aye and the officials from the Ministry of Foreign Affairs.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (UNOCHA) ၏ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူး Ms. Ursula Mueller အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၄-၅-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (UNOCHA) ၏ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူး Ms. Ursula Mueller ခေါင်းဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၁၄-၅-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၁၁၅ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကုလသမဂ္ဂဘက်မှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးနေသည့် အစီအစဉ်များ၊ အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။